Guusha Barca ay kasoo hoysay garoonkeeda Nou Camp ayaa timid wixi ka danbeeyay daqiiqadii 64-aad, markaas oo uu macallinka kooxda goobta keenay xidiga sare ee Barcelona Lionel Messi, xilligaasi waxay ciyaarta mareysay 1-1. Barca waxaa goolka 1-aad u saxiixay laacibka reer France Ousmane Dembele ka hor inta uusan barbarreyn Martin Braithwaite.
Laacibkaan u dhashay dalka Argentina Messi ayaa marki uu badal kusoo galay kaddib billaabay inuu khatar geliyo goohayaha kooxda Leganes Ivan Cuellar. Goolka labaad ee Barcelona waxa uu yimid daqiiqadii 71-aad, kadib marki uu Luis Suarez ku dharbaaxay shabaqa kubad uu soo tufay goolhayaha Leganes oo celin waayay shuut uu Messi kasoo ganay banaanka xerada ganaaxa.
Goolki guusha u xaqiijiyayna waxaa dhamaadki ciyaarta ku xiray Messi, waxaana uu ahaa kiisii 18-aad ee uu ka dhalinayo horyaalka Spain ee La Liga xilli ciyaareedkaan. Waxay guushaasi Barca ka dhigtay in ay shan dhibcood ka sara marto kooxda kusoo xigta ee Atletico Madrid.
Kooxda Athletico Madrid waxay Sabtidi 3-0 uga badisay Huesca. Sidoo kale waxaa guul muhiim ah soo hoysay kooxda ay Athletico mataanaha yihiin ee Real Madrid, oo Sabtidii 2-0 ugu awood sheegatay kooxda Sevilla oo ayna kala baxday kaalinta saddexaad.
Real waxay dhamaadki ciyaarta goolasha u kala dhaliyay Casemiro iyo Luka Modric. Waxay hadda urursatay 36 dhibcood, iyada oo 3 dhibic ka saramartay Sevilla oo hadda u dhaadhacday kaalinta afraad.
Ciyaarihi kale, ee Axadi dhacay Real Betis waxay 3-2 uga badisay
Girona, Villarreal waxay bareejo 1-1 ah iksu mari waayeen Athletic Bilbao, Rayo Vallecano iyo Real Sociedad waxay iskula agdhaceen barbarro 2-2 ah. Halka Levante ay 2 – 0 ku khasaartay Real Valladolid.